सरकारी छाप किर्ते गरेर जग्गा कुम्ल्याउने एमाले सांसदको पद चट् ! - Kantipath
सरकारी छाप किर्ते गरेर जग्गा कुम्ल्याउने एमाले सांसदको पद चट् !
प्रदेश १ एमाले सांसद गुलेफुन खातुन पदमुक्त हुने भएकी छिन्। समानुपातिक सांसद खातुनलाई उच्च अदालत विराटनगरले सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो।
मोहियानी हकको जग्गा एकलौटी बनाउनलाई कागजात जुटाउने क्रममा मोरङको साबिकको कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकारी छापा किर्ते गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ वैशाख ३१ गते खातुनलाई १ वर्ष कैद सजाय र ५० रुपैयाँ जरिवानाको सुनाएको थियो।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उनले २०७४ भदौ १९ गते उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएकी थिइन्। उच्चले पनि दोषी ठहर गर्दै खातुनलाई २०७६ पुस ९ गते १ वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
खातुनसहित उनका पति शेख सिलबर मियाँ, कदमाह गाविसका खरिदार विजयकुमार कामत र पियन दीपचन्द्रकुमार मण्डललाई समेत जिल्ला अदालतले जनही १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
किर्ते मुद्दामा दोषी देखिएपछि कामत र मण्डललाई सरकारी कर्मचारी भएका कारण थप २ वर्ष सजायको फैसला भएको थियो। उच्च अदालतले खातुनका पति शेख सिल्बर मियाँलाई भने सफाइ दिइसकेको छ।
सांसद खातुनले उच्चको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनः सुनुवाइको माग राखेर खातुनले २०७६ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी दिइन्। उच्चको फैसलाविरुद्ध इन्साफ दोहोर्‍याइ पाउँ भनेर निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा नदिएपछि उनी विरुद्ध उच्च अदालतले गरेको फैसला सदर भएको हो।